Iingcebiso zokulondolozwa kwengxowa ongazaziyo - Iindaba - Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd
Ikhaya > Iindaba > Iindaba Zoshishino > Iingcebiso zokulondolozwa kwengxowa ongazaziyo
Iingcebiso zokulondolozwa kwengxowa ongazaziyo
Kuyatshiwo ukuba iingxowa zizithandwa zesibini zowasetyhini, ke kufuneka sisiphathe njani "isithandwa" sethu? Emva kokuthenga ibhegi, ngakumbi iingxowa ezibiza kakhulu ezithengwa ngexabiso eliphezulu, kuyafuneka ngakumbi ukuba wazi iindlela ezichanekileyo zokugcina. Ukuba asiyiphathi kakuhle, iya kubuna kwaye iwe, kwaye intyatyambo iya kulahla umbala wayo. Namhlanje siza kuthetha ngeendlela ezithile kunye neendlela zokugcina ibhegi.
Q: Loluphi uhlobo lwamanyathelo okhuseleko ekufuneka ibe lukhetho lokuqala kwiingxowa zesikhumba ezisandula ukuqala?
Impendulo: Emva kokuthenga ibhegi yesikhumba, ungakhathazeki ngokubaleka ujikeleze umqolo wakho. Kufuneka "sinxibe ilokhwe" kwiingxowa zethu zesikhumba. Ngengxowa yesikhumba, ngakumbi eyona ibiza kakhulu ibhegi yangaphambi kofele lweenkomo, siyayithenga Emva koko, kufuneka kongezwe umaleko we "dermis arhente yokwaleka". Abantu abaninzi basenokuba khange beve ngayo. Oku kuyafumaneka kwiTaobao. Ngapha koko, sihlala sinxibelelana nokwaleka kwesikhumba. Xa ukhathalela izihlalo ngaphakathi kwemoto kwivenkile yobuhle bemoto, iinkosi zevenkile yobuhle ziya kusula isitulo semoto emva kokucoca ukukhwela kweemoto. ". Emva kokufaka oku engxoweni, ilingana nokongeza umaleko ongaphezulu wefilimu ebonakalayo elubhegini. Ngale nto, inokuthintela ngokufanelekileyo uthuli kunye nokungcola, kwaye kuthintele ukungcola nothuli ekungeneni kwimingxunya yesikhumba.
Q: Ngcono umgangatho webhegi, kokukhona kungangeni manzi?
Impendulo: Iingxowa ezisemgangathweni ezisemgangathweni ziingxowa zesikhumba, kodwa iingxowa zesikhumba azinyanzelekanga ukuba zingangeni manzi. Izikhwama zesikhumba eziqhelekileyo zongezwa ngezinto ezingangeni manzi kunye neoyile. Ukungabinamanzi ngokulinganayo kulungile, kodwa kuya kufuneka uyisebenzise ngokukhawuleza emva kokumanzi. Sula ngetawuli ecocekileyo (sebenzisa ilaphu leglasi okanye isiponji kungcono). Ukuba kukho amanzi, kulula ukufumana ukungunda. Ngokubanzi ngeentsuku zemvula, ukuba ufuna ukuhamba, kungcono ukuphatha uhlobo lwesikhwama selungelo elilodwa lomenzi. Ukungangeni kwamanzi kwesikhumba selungelo elilodwa lomenzi ngokuqinisekileyo kunamandla kuneebhegi eziqhelekileyo, kuba umaleko wepeyinti ufafaziwe kumphezulu wesikhumba okanye kwi-PU, enefuthe eligudileyo nelikhanyayo. , Le yinkqubo yesikhumba selungelo elilodwa lomenzi, olu luhlu lwepeyinti lunokungena manzi ngokufanelekileyo, kwaye kulula ukuba usule ucocekile.
Umbuzo: Ungajongana njani nokungcola okunamafutha ekunzima ukuwacoca engxoweni?
Impendulo: Ukhetho lokuqala luxhomekeke kwimathiriyeli ebhegini. Ukuba yi-PU, i-microfiber, i-PVC, i-nylon, i-denim kunye nezinye iibhegi ezingezizo zesikhumba, singasebenzisa isepha kunye nesepha, emva koko sisebenzise itawuli ecocekileyo ukuhlamba. Kodwa ukuba sisikhumba sokwenyani, musa ukusebenzisa isepha okanye isepha. Ukupheliswa kwedermis kufuna ukusetyenziswa kwe "arhente yokucoca i-dermis", efumaneka kwiTaobao. Idermis kufuneka icocwe ngengcali, kungenjalo iya konakalisa ngokulula i-cortex.
Umbuzo: Ngaba ingxowa ingavezwa elangeni emva kokuba imanzi?
Impendulo: Hayi, nokuba yeyiphi na into ebhegini, kuya kufuneka uphephe ukuvezwa lilanga. Ukuba imanzi, yisule ngetawuli ecocekileyo kuqala, emva koko usebenzise isiponji ukufunxa amanzi kumphezulu wengxowa, kwaye uyibeke kwindawo enomoya ukuze yome ngokwendalo. Ukuba lulusu, ukujongana ngqo nelanga kuya kubangela ukuba isikhumba some kwaye siqhekeze, nokuba ayisiyo ngxowa yesikhumba, iyakucima ukuba ibekwe elangeni.
Q: Ndingenza ntoni emva kokuba ibhegi iye ingunda?
Impendulo: Iingxowa zomngundo zihlala zibangelwa kukufuma. Kufuneka usoloko ingqalelo ukufuma. Ukuba kukho iimpawu zomswakama, yise kwindawo engenisa umoya kwaye yome okomzuzwana. Emva kokuvunda komngundo, ukhetho lokuqala kukuntywila isiponji ngesicoci sokulwa ukungunda ukucoca ngokupheleleyo uthuthu lomngundo kwiindawo ezinokubumba, emva koko ulubeke kwindawo enomoya ukuze wome. Emva kokumisa, khumbula ukusula ukungunda kunye ne-arhente ye-antibacterial kumphezulu wengxowa ukunyanga kakuhle ukungunda (umpu wokutshiza ungcono, unokutshiza umphezulu wengxowa, ixabiso lompu wokutshiza eTaobao malunga ne-80 yuan). "Izinto zokucoca ukungunda ukungunda" kunye "neearhente zokulwa ukungunda zomchiza" ezisetyenziswe apha nazo zibiza kakhulu. Ixabiso elikwiTaobao limalunga neshumi leyuan ibhotile, ke kuya kufuneka uyigcine ekhaya. (Ukongeza, ukuba awunazo ezi zinto ekhayeni lakho, iviniga inokwenzeka, kodwa umphumo awulunganga njengabahlambululi abaziingcali.)
Q: Ngaba ipolisi yezihlangu ingasetyenziselwa ukugcina iingxowa?
Impendulo: Hayi, izihlangu zesikhumba kunye neengxowa zizinto ezimbini ezahlukeneyo. Awunakho ukusebenzisa ipolishi yezihlangu ukugcina iibhegi zakho ukonga imali. Ukuba usebenzisa ipolishi yezihlangu ukugcina iibhegi zakho, umphumo uya kuba kukufiphala kombala. Esi sisiphumo sokuvavanywa kwam. Ngokwesiqhelo, khumbula ukusebenzisa ioyile yokhathalelo lobungcali kwiingxowa zesikhumba. Olu hlobo lomgangatho olungileyo, ixabiso leTaobao limalunga ne-100 yuan ibhotile, ukuba yingxowa yokuthenga oyithengayo, uhlala ukhumbula ukufaka ioyile yokhathalelo lobuchwephesha, ngapha koko, iya kubiza kakhulu. Sukuzikhathalela iingxowa ozithenge kakhulu.
Q: Ifakwa njani ibhegi xa ingasetyenziswa?
Impendulo: Izikhwama ezingalukanga ziya kusetyenziswa apha. Xa wonke umntu ethenga iibhegi, abathengisi baya kubanika iingxowa ezingalukwanga. Ndiyakholelwa ukuba abantu abaninzi bayayilahla le njengenkunkuma kwaye bacinga ukuba ayinampembelelo. Ngapha koko, ayilunganga. Owu. Iingxowa ezingalukwanga zinendima ebaluleke kakhulu. Sibeka iibhegi kwiingxowa ezingalukanga, ezinokudlala indima ekungangeni nothuli, kwaye zinemisebenzi yokugxotha amanzi kunye nobungqina bokufuma. Okubaluleke ngakumbi kukuba, ayilukwanga Ilaphu nalo liyaphefumla, ukuze xa kugcinwa ibhegi yesikhumba, ingabi nakungena lula njengoko ikwiplastikhi kwaye ibangele ufele lwebhegi yesikhumba ukuba yome kakhulu kwaye yonakaliswe. Ukuba yingxowa emiselweyo, ungabeka iphepha kuyo xa ingasetyenziswa (ngokubanzi, ibandakanyiwe engxoweni xa uthenga ibhegi emileyo, khumbula ukuba ungayilahli), ungabamba imilo yengxowa kuthintele ukuba ungakhubazeki emva kokuba ushiywe ixesha elide. .
Q: Ngaba kunyanzelekile ukuba uthwebe isikhumba okanye iingxowa ze-PU?
Impendulo: Ngokubanzi, ayifuneki. Injongo yokuthambisa kukuthintela amanzi kunye neoyile. Xa ibhegi yenziwe, izinto ezingangeni manzi zihlala zongezwa ngaphezulu. Ukulahla akuyomfuneko. Kulondolozo oluqhelekileyo, kunokwanela ukusula umphezulu ngeoyile yokhathalelo lwesikhumba.
Q: Ndingenza ntoni xa ingxowa yonakele okanye yonakele?
Impendulo: Ukuba ibhegi exabisekileyo yesikhumba yonakele, yise kwivenkile yokulungisa izinto zesikhumba ukuyilungisa ngexesha. Sukuba nexhala lakho ngokwakho, ukuthintela iingxaki ezinkulu. Ngeli xesha, kufuneka ube "notyando" engxoweni. Emva koko inenkangeleko entsha kraca. Ngokwesiqhelo, ukuba ibhegi yesikhumba yaphukile, akukho sidingo sokuyilungisa. Ukuba indala ayizanga, entsha ayizi, ke tshintsha nje ibhegi.
Okulandelayo:Ukudibana okuncinci kukufundisa ukugcina iingxowa ukugcina indawo